मल’मा’स मा, नब दम्पतीले के गर्नु हुँदैन, यस्तो गरे के हुन्छ? हेर्नुहोस् पूरा रहस्य… - Mitho Khabar
September 17, 2020 mithokhabarLeaveaComment on मल’मा’स मा, नब दम्पतीले के गर्नु हुँदैन, यस्तो गरे के हुन्छ? हेर्नुहोस् पूरा रहस्य…
यसपाली असोज दुई गते सुक्रबारदेखि आगमी ३० गतेसम्म मलमास अर्थात अधिकमास परेको छ । मासको अर्थ महिना हो । खासमा यसको नाम मलमास नभएर अधिक मास हो । यसलाई पुरुषोत्तम मास पनि भनिन्छ । पञ्चांग गणनाको सूर्यमानअनुसार वर्षमा ३६५ दिन, १५ घडी, ३१ पला र ३० विपला हुन्छ जब कि चन्द्रमान अनुसार वर्षमा ३५४ दिन, २२ घडी, १ पला र २३ विपला हुन्छ । सूर्य तथा चन्द्रमानबीच वर्षमा १० दिन ५३ घडी, ३० पला एवं ७ विपलाको अन्तर हुने गर्छ । यसै अन्तरलाई समायोजित गर्नका लागि ‘अधिक मास’को व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।